musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Nhoroondo yehotera: Libby's Hotel nemabhati, New York, NY
tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Libby's Hotera nemabhati
rakanyorwa Stanley Turkel CMHS hotel-online.com
Mukupera kwema1920, misika yemasheya yakanga ichikura, mabhizinesi aive nekunakidzwa nepundutso uye vagadziri vaive vachivaka zvivakwa zvitsva nekukurumidza.
Mortgage makambani akatanga kupa mogeji-yakachengetedzwa kuchengetedzeka, mhando nyowani yekudyara.
Imwe yezvivakwa zvitsva yaive 12-nhurikidzwa Libby's Hotera neBaths, yakavakwa muna 1926 pakona yeChrystie neDelancey Migwagwa mudivi rekumabvazuva kweNew York.
Yaive yekutanga-yevaJudha vese hotera yepamusoro ine dhamu rekushambira rakashongedzwa, jimu yemazuvano, mabhati eRussia neTurkey nemalounge akavhurika kunharaunda yese.
Anovandudza aive Max Bernstein, mutorwa achibva kuScutzk, Russia, uyo akasvika muNew York nemhuri yake muna 1900 apo Max aive nemakore gumi nerimwe. Migwagwa iyo Max akakurira kudivi rekumabvazuva yakazadzwa nevatengesi vengoro, vamwe vaine ngoro dzinodhonzwa nemabhiza, vana vachitamba mitambo yemumigwagwa uye vanogara tenement vachitandara pazvitanda. Nehurombo, pakafa amai vake Libby mukati megore rimwe chete, Max akatiza pamba uye akanorara husiku mupaki diki padhuze. Mumakore apfuura, Max akataura kuti hope dzake dzekuvaka Libby's Hotel pakona yeChrystie neDelancey Migwagwa yakauya kwaari husiku ihwohwo.
Mushure memakore ekuva nemaresitorendi akateedzana, imwe neimwe yainzi Libby's, Max akakwanisa kuwana nzvimbo pakona yake yaanofarira kwaakavaka hotera yakavhurwa musi waApril 5, 1926. Max sezviri pachena aive chizvarwa chekuzvarwa mushambadzi nekuti akaisa mari huwandu husingaenzanisike hwesimba nemari mushandirapamwe yakakura yekusimudzira mumapepanhau mazhinji ezuva nezuva echiYiddish. Pazuva rekuvhura, iyo New York Times akabatana nemamwe mapepa mukuzivisa kuvhurwa kukuru. Iyo Libby Hotera yaive neinoyevedza-nhurikidzwa mbiri yekukwevera ine rakapenya ruvara plaster siringi inotsigirwa nemafirita emarble mbiru. Ihotera iyi yaive nemakamuri emusangano, mabhawa uye maviri maresitorendi e kosher. Max akabata zviitiko zverudo uye makirasi ekushambira evana vemunharaunda.
Iyo Libby Hotel inotepfenyura kubva kune yekutanga Yiddish redhiyo, WFBH (kubva kumusoro kwewestside Hotel Majestic) iine vanozivikanwa vanovaraidza, yemitambo theatre nemwenje dzakadai saSol Hurok, Rube Goldberg naGeorge Jessel. Bernstein haana kubhadhara mari, achihaya semutungamiriri wake wemimhanzi Josef Cherniavsky, mutungamiri weYiddish-American Jazz Band uye anozivikanwa seMaJuda Paul Whiteman. Kwemakore ayo maviri ekutanga, hotera yacho yaiita kunge ichibudirira zvikuru asi pakupera kwa1928, denga rakadonha mukati.
Kuteerera kwe mahotera matsva anga avhurwa muNew York. Vazhinji, kuti varambe vari solvent, vakatanga kupa maJuda, vachibvisa vatengi vaMax. Max angangodaro akagona zviri nani kukwikwidza kana mamiriro ake epamoyo anga asati atova mukudzikira kwakadzika; Gumiguru 20, 1926, mudzimai wake Sarah akafa. Mukutongwa kwakazotevera kwedare, Max aizopupura kuti kushungurudzika kwaakawana kwakamusiya asingakwanise kushanda.
Kupfuurirazve, waakakweretesa chaiye aive American Bond uye Mortgage Company (AMBAM), isingazivikanwe inodya chikwereti. Nguva pfupi isati yasvika yekuparara kwemusika wemasheya muna 1929, AMBAM yakafungidzira pahotera uye, mukushamisa kwekushamisa kwekupedzisira, Meya Jimmy Walker akagadza Joseph Force Crater, gweta rakabatana-neTammany semugamuchiri. Sekureva kweMutongi Crater, AMBAM inogona kunge yaive neruzivo rwemukati rweguta kuronga kuwedzera Chrystie Street. Chero zvazvingaitika, AMBAM ikozvino yakataura kuti hotera iyi yaive nemamirioni emadhora 3.2 (mushure mekukoshesa Libby's Hotel pamadhora miriyoni nemazana matatu emadhora ekuratidzira). Kuburikidza nedunhu rakakurumbira, New York City yakatora muridzi uye yakabhadhara AMBAM $ 1.3 mamirioni. Guta rakazoputsa zvivakwa mubhokisi kusanganisira Max Bernstein's Libby's Hotel neBaths.
Asi pane zvakawanda kunyaya. Muna 1931, AMBAM akabatwa nemhosva yechirongwa chakafanana maererano neMayflower Hotel muWashington, DC Mutongi Crater mumwe chete ndiye aigashira kubviswa kweMayflower. Akashaika mwedzi mina gare gare uye haasati awanikwa kubvira ipapo. Chrystie Street yakawedzeredzwa, iyo Great Depression yakaiswa mukati uye pakupedzisira, saiti ikashandurwa kuita Sara Delano Roosevelt Park naRobert Moses.
Pakafa Max Bernstein muna Zvita 13, 1946, iyo New York Times obituary yakanyora kuti: "Max Bernstein, 57, Aimbova Muridzi weHotera… Akavaka $ 3,000,000 Chivakwa muSlums, chete kuzoona Chirangaridzo kuna Amai Razed."
Uku ndiko kunenge kuri kupera kwenyaya iyi inonakidza kunze kwekunge iyo Pakn Treger * chinyorwa chakazivisa zvinotevera zvinotevera:
Iyo nyaya yeLibby yakadzikira mukusaziva kusvika zhizha ra2001, apo chikamu chemugwagwa padyo nekona yeChrystie neDelancey Migwagwa yakapinda mukati, ichigadzira sinkhole. Iyo gomba rakakura rakakura zvekumedza muti wese ndokutanga kupindira mumigwagwa yeguta uye nenzvimbo yepamusoro padyo muSara Delano Roosevelt Park. Mumazuva iwayo asina mhosva pamberi paGunyana 11, iyo sinkhole yakaita senge iri tyisidziro huru yakatarisana nechezasi kweManhattan.
Mainjiniya eguta havana kuziva chikonzero, saka vakadzikisa kamera munzvimbo isina chinhu. Kukushamisika kwavo, tsoka makumi maviri nembiri pazasi pechiso vakawana imba isina kugadzikana, izere nemabhegi emabhuku. Ivo pavakatsvaga marekodhi kuMasipala Archives, vakaziva kuti Libby's Hotel yakambomira ipapo uye kuti vaive vawana kamuri mune yayo yepasi pevhu. Mune New York Times yaSeptember 11, 2001, Commissioner wePaki dzeNew York City Henry J. Stern akanokorwa mashoko achiti, "Zvinondiyeuchidza nezvePompeii."
Kusiyana naPompeii, hapana kuyedzwa kwakaitwa kusvika mukamuri kana kucherwa. Vainjiniya veguta vakasarudza kuizadza ne grout, vachiviga mukamuri uye nezvayo zvisinganzwisisike. Muti mutsva wakasimwa, uye paka yakagadziriswa.
* "Ritz ane Shvitz" naShulamith Berger naJai Zion, Pakn Treger, Chitubu 2009
Bhuku rake idzva "Great American Hotel Architects Vhoriyamu 2" ichangoburitswa.
Mamwe Akatsikiswa Mabhuku ehotera:
• Vakuru vemahotera eAmerican: Mapiyona eiyo Indasitiri yeHotera (2009)
• Yakavakirwa Kupedzisira: 100+ Yemakore-Mahotera Mahotera muNew York (2011)
• Yakavakirwa Kuguma: 100+ Makore-Mahara Mahotera Kumabvazuva kweMississippi (2013)
• Hotera Mavens: Lucius M. Boomer, George C. Boldt, Oscar weWaldorf (2014)
• Vakuru vemahotera eAmerican Vhoriyamu 2: Mapiyona eiyo Indasitiri yeHotera (2016)
Yakavakwa Kwekupedzisira: 100+ Makore-Mahara Mahotera Kumadokero kweMississippi (2017)
• Hotel Mavens Vhoriyamu 2: Henry Morrison Flagler, Henry Bradley Plant, Carl Graham Fisher (2018)
• Yakakura American Hotera Vagadziri Vhoriyamu I (2019)
• Hotera Mavens: Vhoriyamu 3: Bob naLarry Tisch, Ralph Hitz, Cesar Ritz, Curt Strand
Ese aya mabhuku anogona kuodhwa kubva kuAuthorHouse nekushanya www.stanleyturkel.com nekudzvanya pamusoro webhuku racho.